बहादुर माओवादी, कायर माओवादी
ठाड्कानेलाई कुरा गर्न पनि अप्ठेरो लागिरा’छ । कुरा माओवादीकै हो । हिजो–अस्तिजस्तै लाग्छ, माओवादी भन्ने शब्द यस्तो थियो कि समाजमा कसैले गल्ती–फट्याइँ अथवा बेइमानी ग¥यो भने मानिसहरु माओवादीकाँ जान्थे । ‘पुरानो सत्ताको अदालतमा न्याय नपाए जनअदालत जानू’ भन्ने जनबोली बनेको थियो ।
भ्रष्टाचार, असत्य र झूठका विरुद्ध कोही लड्थ्यो भने माओवादी लड्थ्यो । गल्ती गर्नेहरु माओवादीको नामै सुन्दा अत्तालिन्थे । तर विडम्बना ! अहिले स्थिति अलि उल्टो जस्तो छ । अहिले हिजो माओवादी जेका विरुद्ध लड्यो, आज ती सबै माओवादीमाथि लाग्न थालेको छ । ठाड्काने यसो गम खान्छ । स्थिति बडो दर्दनाक नै छ । शहीद हुनेहरु भइहाले । माओवादीका नाममा हिजो लड्नेहरु आज पनि नाममा माओवादी नै छन् । फरक यत्ति छ कि हिजो माओवादी भ्रष्टाचार, खुसखोर, तस्कर, व्यभिचारीहरुसँग लड्यो, आज ती सबै आरोप माओवादीमाथि नै लाग्न थालेको छ, लागिरा’ख्या छ । अहिले आरोप लागेका माओवादीहरु आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । जनताले यो विश्वास गर्छन् कि जसलाई जे आरोप लागेको सम्बन्धित पक्षले त्यसको खण्डन गरेन भने त्यो आरोप सही हो ।
त्यस्तो माओवादी आन्दोलन अहिले किन यस्तो भयो ? आखिर जनयुद्धका मूल पात्रहरु उनै छन् । पार्टीको नाम पनि माओवादी नै छ । तर हिजोको त्यो माओवादी आजै किन यस्तो भयो ? कसले यस्तो गरायो ?
भन्सारबाट सुन तस्करी हुन्छ, माओवादी नेताको नाम जोडिन्छ । काठ तस्करीको कुरा आउँछ माओवादीको नाम आउँछ । कर्मचारी सरुवा–बढुवामा नगद कारोवारको कुरा आउँछ माओवादीको नाम आउँछ । शहर–बजारमा सबैभन्दा ठूलो र अग्लो घर माओवादीकै नेताका नाम जोडिन्छन् । अर्थात् जे–जे विरुद्ध माओवादी हिजो लड्यो आज त्यो सप्पै गर्नेमा माओवादीको नाम जोडिन्छ । के माओवादीले शुरु गरेको क्रान्ति यस्तै भारी बोक्नलाई थियो त ? राज्यसंरक्षित गलत कामका विरुद्ध शंखघोष गरिएको जनयुद्ध यत्तिकै लागि थियो त ? ठाड्काने अहिलेसम्म आफूलाई माओवादी आन्दोलनकै एउटा सदस्य ठान्छ । तर उसलाई माओवादी भनेर आफ्नो वरपर मुख देखाउन लाज लाग्ने भइसकेको छ । जनयुद्धताका बहादुर र निस्कलंक माओवादी शान्ति–प्रक्रिया र सरकारमा गएपछि यस्तो आरोप किन ? यी सबै गलत कुराको खण्डन गर्दै हिंड्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा माओवादी नेताहरु किन पुगे ?
माओवादी नेताहरु जनयुद्धकालमा जस्तै किन गर्जिन सकिरहेका छैनन् ? किन यस्तो कायरता देखाइरहेका छन् ? बुढा माओले बडो चिन्ताका साथ भनेका थिए– काँचका गोलीले नढलेका हाम्रा कामरेडहरु गुलिया गोलीले किन ढल्दैछन् ? माओ यतिञ्जेल बाँचेका उनकै नाममा चलेको पार्टीका यो दुर्दशा देखेर के भन्थे होलान् ? ठाड्कानेको यो संश्लेषण छ– यी कायर माओवादी हुन् ।